YINTONI IAKHAWUNTI YOMSEBENZISI KUNYE NEPROFAYILI YOMSEBENZISI KWIIFESTILE 10, 8.1 KUNYE NE-7 - ITHAMBILE
Yintoni iAkhawunti yoMsebenzisi kunye neProfayili yoMsebenzisi kwiifestile 10, 8.1 kunye ne-7
Iprofayile yomsebenzisi yenziwe, xa ungena okokuqala kwiPC yakho ngeakhawunti yoMsebenzisi kwaye igcina zonke izinto ozikhethayo, useto lweapp, ulwazi lwedesktop kunye nenye idatha. Ihlala ibekwe kwi-PC yakho yendawo yeDiski drive (C:abasebenzisi[igama lomsebenzisi]) ukuqinisekisa ukuba izinto ozikhethayo ziyasetyenziswa nanini na ungena kwiWindows. Kodwa ukuba ngenxa yesizathu esithile iprofayile yomsebenzisi yonakaliswa, unokujongana neengxaki ezahlukeneyo ekuqaleni okanye Windows 10 Imenyu yokuQalisa iyeka ukuphendula, ii-Apps ziphazamisekile kunye nokunye. Kwaye loo meko, ukucima iprofayile yomsebenzisi ukulungisa Iingxaki ezahlukeneyo ngeakhawunti yomsebenzisi. Nantsi le post sidlula kuyo, Ukwahluka phakathi kweakhawunti yoMsebenzisi kunye neProfayili yoMsebenzisi , Kwaye njani Cima iprofayile yomsebenzisi kwi-Windows 10, 8.1 kunye no-7.
Umahluko phakathi kweakhawunti yomsebenzisi kunye neprofayile yomsebenzisi
A iakhawunti yomsebenzisi yingqokelela yolwazi oluxelayo IiWindows zeziphi iifayile kunye neefolda onokufikelela kuzo, loluphi utshintsho onokuthi ulwenze kwikhompyuter yakho, kunye nezinto ozikhethayo, njengemvelaphi yedesktop yakho okanye umgcini wesikrini.
Kwiikhompyuter zomntu, kukho iindidi ezimbini eziphambili zeakhawunti yomsebenzisi: umgangatho kunye nomlawuli. I-akhawunti yomsebenzisi yomlawuli inamalungelo onke okwenza imisebenzi efana nokufakwa kwezicelo, ngelixa abasebenzisi abasemgangathweni bangasebenzisa kuphela i-akhawunti yomsebenzisi njengoko kumiselwe ngumlawuli.
Iprofayile yomsebenzisi yahlukile kwiakhawunti yomsebenzisi, equlathe useto lwakho lwemvelaphi yedesktop, izigcini zesikrini, isalathi esikhethwayo, useto lwesandi, kunye nezinye iimpawu kwaye iqinisekisa ukuba izinto ozikhethayo ziyasetyenziswa nanini na xa ungena kwi-Windows. Iiprofayili zabasebenzisi zisetyenziswa Nanini na xa ungena kwi-Windows PC yakho kwaye yenziwa ngokuzenzekelayo xa uqala ukungena kwiifestile zeKhompyutha.
Kwaye kwi-Windows 10, i-akhawunti nganye yomsebenzisi ibandakanya iprofayili yomsebenzisi, eyenziwe ngeefayile kunye neefolda ezigcina iifayile zomntu kunye nezinto ezikhethwayo, izicwangciso zesicelo, ulwazi lwe-desktop, kunye neengcezu ezininzi zedatha.
Uyicima njani iprofayile yomsebenzisi Windows 10
Ke ukuba udibana nengxaki ngeProfayile yoMsebenzisi weWindows, iyonakala, Inkqubo ibambekile emva kokungena, Nanga amanyathelo okuCima iprofayile yoMsebenzisi Windows 10, 8.1, kunye ne-7.
Qaphela: Kufuneka ungene kwenye iakhawunti yomlawuli ukuze ucime iprofayile yeakhawunti yakho. Kwaye hlala ukhumbula ukucima iprofayile yomsebenzisi kuya kucima amaxwebhu omntu, iifoto, umculo, kunye nezinye iifayile, sicebisa ngamandla ukugcina idatha yakho ebalulekileyo kwaye wenze ukubuyisela inkqubo inqaku.
Cinezela Windows + R, uhlobo sysdm.cpl, kwaye kulungile ukuvula iipropati zeSixokelelwano.
Yiya kwiNtengiso isithuba kwaye phantsi kwecandelo leeProfayili zoMsebenzisi, cofa i Iisetingi iqhosha.
Khetha iprofayile yomsebenzisi kwaye ucofe i Cima iqhosha. (Ukuba umsebenzisi usangenile, ke i Cima iqhosha lizakuba ngwevu ngaphandle. Kule meko, khupha umsebenzisi kwaye uzame kwakhona.)
Nje ukuba ugqibezele amanyathelo, phuma kwiakhawunti yangoku, kwaye usayine kwakhona kwiakhawunti osanda kuyicima iprofayile ukuvumela Windows 10 ukwenza kwakhona iprofayile yomsebenzisi kwakhona.
Cima iakhawunti yoMsebenzisi Windows 10
Ukucima ngokupheleleyo iakhawunti yomsebenzisi Cofa iWindows + R, uhlobo lusrmgr.msc, kwaye ungene.
Oku kuya kuvula windows Umsebenzisi wasekhaya kunye nomphathi weqela, Apho ungenza khona iakhawunti yomsebenzisi, cima iakhawunti yomsebenzisi kwaye ulawule abasebenzisi kunye nezicwangciso zamaqela.
Cofa kubasebenzisi kwaye ucofe ekunene kwiakhawunti yomsebenzisi (Ojonge ukuyicima) kwaye ukhethe Cima ukucima iakhawunti yomsebenzisi.
Qaphela:Nanku wena Awukwazi ukususa umlawuli owakhelwe-ngaphakathi kwikhompyuter yakho, kodwa unokucima iiakhawunti zomsebenzisi ozenzileyo.
Kuko konke, ndiyathemba ukuba ngoku uyawuqonda umahluko phakathi kweprofayile yomsebenzisi kunye neakhawunti yomsebenzisi. Uyicima njani iakhawunti yomsebenzisi kunye neprofayile. Yiba nawuphi na umbuzo uzive ukhululekile ukuba uxoxe kwizimvo ezingezantsi.